TSY FIRAHARAHANA MARARY : Nolavin’ny CSBII Tanjombato ny nitsabo ilay vehivavy | NewsMada
TSY FIRAHARAHANA MARARY : Nolavin’ny CSBII Tanjombato ny nitsabo ilay vehivavy
Mahavelon-taraina ny mponina ety ny hafitsoky ny dokotera ato.
Velon-taraina amin’ny tsy fandraisana andraikitry ny CSBII eny Tanjombato ny mponina eny an-toerana. Vehivavy iray nivalampatra teny amin’ny arabe tokony hotsaboina no nolavin’izy ireo, ny herinandro iny…
Vehivavy iray tokony ho 30 taona no hita nitsitra teo amoron’Ikopa, lalana mihazo an’Anosimahavelona, ny talata lasa teo, tokony ho tamin’ny 4 ora maraina. Niboridana tanteraka ity vehivavy ity satria ts misy fitafiana intsony ny ambony ary efa tsy misy takon-kenatra ny ambany. Avy hatrany dia nentin’ireo nahita azy tao amin’ny CSBII Tanjombato izy io, saingy tsy noraharahain’ny dokotera tao an-toerana akory fa nasaina nalefa teny amin’ny HJRA avy hatrany. Velon-taraina, araka izany, ireo olona nanatitra ity vehivavy marary tetsy amin’ny CSBII Tanjombato ity. “Tsy vao izao ity toeram-pitsaboana ity no nandà marary tahaka izao fa efa matetika mihitsy. Tsy misy mihitsy ny fitsinjovana ireo olona marary. Aiza ny famonjena ny aina raha mandà hatrany tahaka izao ny dokotera”, hoy ny vavolombelona nanatri-maso sy nanatitra ity tovovavy ity teny amin’ny CSBII Tanjombato. Nankasitraka ny mpamonjy voina ao Tanjombato ny mponina eny an-toerana nandray an-tanana ity marary ity ary nitondra azy avy hatrany teny amin’ny hopitaly. Nangataka ny tomponandraikitra koa ny mponina eny an-toerana mba hijery akaiky ity tsy fandraisana andraikitra tanterahin’ny dokotera eo anivon’ny CSBII Tanjombato.
Tsy vao izao no nisy tranga tahaka izao eny amin’ireny hopitalim-panjakana ireny. Anisan’ny namaky bantsilana ny tsy fetezan-draharaha eny anivon’ny hopitaly ireny ny Fivondronamben’ny eveka tamin’ny fanambarany farany teo. “Natao hiaro ny aina ny hopitaly. Firifiry moa ny marary mafy entina amin’ny hopitalim-bahoaka no jerem-potsiny. Voatery mody maina ka maty an-dalana satria tsy afaka “nametraka kely” araka ny fiteny ankehitriny”, hoy ny fanambaran’izy ireo. Ny tranga tahaka izao no mahatonga ny eo anivon’ny Fivondronamben’ny Eveka ho velom-panahiana fa “sao misy manao fandringanana ankolaka eto amintsika”. Manao antso avo, araka izany, izy ireo mba hanajan’ny dokotera ny fiainianana nataony.